Ukophulwa kwedatha (Data Breach) kukukhululwa ngabom okanye ngokungacwangciswanga kolwazi olukhuselekileyo okanye lwabucala / oluyimfihlo kwimeko engathembekanga. Eminye imiqathango yale nto ibandakanya ukuxelwa kolwazi olungenanjongo, ukuvuza kwedatha, ukuvuza kolwazi kunye nokuchitheka kwedatha. Iziganeko zisukela kuhlaselo oluhlanganisiweyo lweminqwazi emnyama, okanye abantu abathile abazenzela uhlobo oluthile lokuzizuzela, olunxulunyaniswa nolwaphulo-mthetho oluququzelelweyo, itshantliziyo lezopolitiko okanye oorhulumente belizwe ukuya kukungakhathali kwezixhobo zekhompyuter ezisetyenzisiweyo okanye imithombo yeendaba yokugcina imithombo yolwazi kunye nomthombo ongenakuphikiswa.
Ingcaciso: "Ukophulwa kwedatha kukwaphula umthetho apho kukhutshelwa idatha ekhuselekileyo, ekhuselekileyo, ekhutshelweyo, ebonwayo, ebiweyo okanye esetyenziswa ngumntu ongagunyaziswanga ukwenza oko." okanye iinkcukacha zebhanki, iinkcukacha zempilo yakho (i-PHI), ulwazi oluchongiweyo lomntu (PII), iimfihlo zorhwebo zemibutho okanye iipropathi ezinengqondo. Inkoliso yolwaphulo-mthetho lwedatha lubandakanya ukuvezwa kakhulu kunye neenkcukacha ezingacwangciswanga ezibubuchwephesha - amaxwebhu, kunye nolwazi olubuthathaka.
Ukophulwa kwedatha kunokuba yindleko enkulu kwimibutho eneendleko ezichanekileyo (ukulungiswa, uphando, njl.
Ngokombutho wabathengi ongajonganga nzuzo oCoca amalungelo endawo, ama-227,052,199 eerekhodi ezizezinye ezinolwazi lomntu zibandakanyeka kulwaphulo-mthetho e-United States phakathi kukaJanuwari 2005 noMeyi ka-2008, ngaphandle kweziganeko apho idatha ebuthathaka yayingakhange ivezwe.
Imimandla emininzi idlulisile imithetho yokwaphula idatha, ifuna inkampani ebephantsi kolwaphulo lwedatha ukwazisa abathengi kwaye ithathe amanye amanyathelo okulungisa ukwenzakala okunokwenzeka.
2 Ithemba kunye nemfihlo
3 Ngaphakathi xa kuthelekiswa nosongelo lwangaphandle
4 Ukwaphula idatha yonyango
Ukophulwa kwedatha kungabandakanya izehlo ezinje ngobusela okanye ukulahleka kwemidiya yedijithali enje ngeethephu zekhompyuter, iihard drive, okanye iikhompyuter zeelaptop ezinemithombo yolwazi apho kugcinwa olo lwazi lungabhalwanga, ukuthumela olo lwazi kwiwebhu ngokubanzi okanye kwikhompyuter efikelelekayo. ukusuka kwi-Intanethi ngaphandle kolwazi olufanelekileyo lokhuseleko, ukugqithisela olo lwazi kwinkqubo engavulekanga ngokupheleleyo kodwa engagunyaziswanga ngokufanelekileyo okanye ngokusesikweni yokhuseleko kwinqanaba elivunyiweyo, njenge-imeyile engabhalwanga, okanye ukudlulisela olo lwazi kulwazi Iinkqubo ze-arhente enobutshaba, enje ngenkampani ekhuphisanayo okanye ilizwe langaphandle, apho inokuthi ivezwe kubuchule obunamandla bokuchasana.
I-ISO / IEC 27040 ichaza ukwaphulwa kwedatha njenge: ukulalanisa kukhuseleko olukhokelela kwintshabalalo ngengozi okanye ngokungekho mthethweni, ilahleko, utshintsho, ukuveza okungagunyaziswanga, okanye ukufikelela kwidatha ekhuselweyo ehanjisiweyo, egcinwe okanye eqhubekiswe ngenye indlela.
Ithemba kunye nemfihlo[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]
Umbono wendalo ethembekileyo ulwelo oluthile. Ukuhamba komntu othembekileyo onokufikelela kulwazi olunobuzaza kunokuba kukwaphulwa kwedatha ukuba umsebenzi ugcina ukufikelela kwidatha emva kokupheliswa kobudlelwane bokuthenjwa. Kwiinkqubo ezisasaziweyo, oku kunokwenzeka nangokuqhekeka kwiwebhu yethemba. Umgangatho wedatha yenye yeendlela zokunciphisa umngcipheko wokophulwa kwedatha, ngokuyinxenye kuba ivumela umnini wedatha ukuba alinganise idatha ngokokubaluleka kwaye anike ukhuseleko olungcono kwidatha ebaluleke ngakumbi.
Uninzi lweziganeko ezinje zapapashwa kumajelo eendaba zibandakanya ulwazi oluyimfihlo lomntu ngamnye, o.k.t. iinombolo zokhuseleko loluntu. Ukulahleka kolwazi oluhlanganisiweyo olunjengeemfihlo zorhwebo, ulwazi olubuthathaka lwenkampani, kunye neenkcukacha zezivumelwano, okanye ulwazi lukarhulumente zihlala zingachazwa, kuba akukho sizathu sinyanzelisayo sokwenza oko kungabikho monakalo kubemi babucala, nakuluntu ngokubanzi umsitho unokuba ngowonakalisayo kunolahleko lwedatha ngokwayo.
Ngaphakathi xa kuthelekiswa nosongelo lwangaphandle[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]
Abo basebenza ngaphakathi kwintlangano ngoyena nobangela wolwaphulo lwedatha. Uqikelelo lolwaphulo-mthetho olubangelwe ziimpazamo "zomntu" ngengozi ukusuka kwi-37% yiPonemon Institute ukuya kwi-14% yiVerizon 2013 yeNgxelo yoPhando loPhando. Udidi lwesoyikiso lwangaphandle lubandakanya abahlaseli, imibutho yolwaphulo-mthetho kunye nabadlali abaxhaswe ngurhulumente. Imibutho yobungcali yabaphathi beempahla ze-IT basebenza ngokuqatha kunye neengcali ze-IT ukubafundisa ngezona ndlela zokunciphisa umngcipheko kuzo zombini izoyikiso zangaphakathi nangaphandle kwiiasethi ze-IT, isoftware kunye nolwazi. Ngelixa uthintelo lokhuseleko lunokuphambukisa ipesenti ephezulu yemizamo, ekugqibeleni umhlaseli okhuthazayo unokufumana indlela kuyo nayiphi na inethiwekhi. Esinye sezicatshulwa ezili-10 eziphezulu ezivela kwi-CEO yeCisco uJohn Chambers sithi, "Zimbini iintlobo zeenkampani: ezo ziye zaqhekezwa, kwaye ezo zingazaziyo ukuba ziqhekeziwe." Ummeli okhethekileyo we-FBI weCyber ​​Special Operations uLeo Taddeo walumkisa kumabonakude waseBloomberg, "Uluvo lokuba ungayikhusela iperimeter yakho iyawa ecaleni kwendlela kwaye ubhaqo ngoku lubalulekile."
Ukwaphula idatha yonyango[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]
Inqaku eliphambili: Ukophula idatha yonyango
Abanye abantu abadumileyo bazifumene bengamaxhoba olwaphulo-mthetho olungafanelekanga lokufikelela, nangona kunjalo ngokukodwa, hayi inxenye yolwaphulo olukhulu. Ngenxa yoluhlu lokophulwa kwedatha yezonyango kunye nokunqongophala koluntu, amanye amazwe amisele imithetho efuna ukuba kubekwe ukukhusela nokukhusela ulwazi oluyimfihlo njengoko kwabelwana ngalo ngombane kunye nokunika abaguli amalungelo athile abalulekileyo okujonga iirekhodi zonyango kwaye zifumana isaziso selahleko kunye nokufunyanwa okungagunyaziswanga kolwazi lwezempilo. I-United States kunye ne-EU inyanzelise ukwaphulwa kwedatha yezonyango. Ukwaphulwa kwengxelo yolwazi ngezonyango kuya kusiba yinto eqhelekileyo eMelika.
Iziphumo[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]
Nangona izehlo ezinje zibeka umngcipheko wobusela okanye ezinye iziphumo ezibi, kwiimeko ezininzi akukho monakalo uhlala uhleli; nokuba ukwaphulwa kwezokhuseleko kuyalungiswa ngaphambi kokuba ulwazi lufikelelwe ngabantu abangathembekanga, okanye isela linomdla kuphela kwizixhobo ezibiweyo, hayi idatha equlethwe kuyo. Nangona kunjalo, xa ezo ziganeko zaziwa esidlangalaleni, kulisiko ukuba umntu owonileyo azame ukunciphisa umonakalo ngokunikezela ngobhaliso lwexhoba kwiarhente yokunika ingxelo ngetyala, umzekelo, amakhadi amatyala amatsha, okanye ezinye izixhobo. Kwimeko ekujoliswe kuko, ulwaphulo lwendleko luka-2013 Iithagethi yokwehla okubonakalayo kwenzuzo, ethi ijikeleze iipesenti ezingama-40 kwikota yesine yonyaka. Ekupheleni kuka-2015, ekujoliswe kuko kwapapashwa ingxelo ebanga ilahleko iyonke yeedola ezingama-290 yezigidi kukophula idatha ehlawulwayo.
Ukwaphulwa kwe-Yahoo kuchazwe ngo-2016 kunokuba yenye yezona zibiza kakhulu namhlanje. Ingathoba ixabiso lokufunyanwa kwayo yiVerizon nge-1 yezigidigidi zeedola. I-Verizon kamva ikhuphe ukuphinda-thethana kwabo kwi-Yahoo bevuma ukwehlisa ixabiso lokugqibela ukusuka kwi- $ 4.8 ukuya kwi- $ 4.48 yezigidigidi. Ulwaphulo-mthetho lwe-Intanethi lubiza iindleko zamandla kunye neenkampani eziluncedo ezixabisa i-12.8 yezigidi zeedola ngonyaka kwishishini elilahlekileyo nakwizixhobo ezonakalisiweyo ngokwe-DNV GL, iqumrhu lezatifikethi lamazwe aphesheya kunye noluntu oluhleliweyo olusekwe eNorway. Ukophulwa kwedatha kuxabisa imibutho yokhathalelo lwempilo i-6.2 yezigidigidi kule minyaka mibini idlulileyo (mhlawumbi ngo-2014 nango-2015), ngokophando lwePemon.
Kwezempilo, ngaphezulu kwezigidi ezingama-25 zabantu baye babiwa ukhathalelo lwempilo, okukhokelela ekubeni kubiwe isazisi sabantu abangaphezulu kwezigidi ezi-6, kwaye iindleko zokuphuma epokothweni zamaxhoba ziphantse zangama- $ 56 ezigidi.
Kunzima ukufumana ulwazi malunga nelahleko ethe ngqo nengathanga ngqo ngenxa yokophula idatha. Indlela eqhelekileyo yokuvavanya ifuthe lokophuka kwedatha kukufunda indlela abasabela ngayo kwimakethi enjalo njengommeli weziphumo zoqoqosho. Oku kuqhutywa ngokusetyenziswa kwezifundo zomnyhadala, apho umlinganiso wefuthe loqoqosho lomsitho unokwakhiwa ngokusebenzisa amaxabiso okhuseleko aqatshelwe ngaphezulu kwexesha elincinci. Izifundo ezininzi ezo zifundo ziye zapapashwa ngeziphumo ezahlukeneyo, kubandakanya imisebenzi kaKannan, Rees, noSridhar (2007), Cavusoglu, Mishra, and Raghunathan (2004), Campbell, Gordon, Loeb, and Lei (2003) kunye no Schatz no IBashroush (2017).
Kuba ivolumu yedatha ikhula ngokucacileyo kwixesha ledijithali kwaye ukuvuza kwedatha kwenzeka rhoqo kunakuqala, ukuthintela ulwazi olubuthathaka ekuvezeni amaqela angagunyaziswanga kuba yenye yezona zinto zixhalabisayo kwezokhuseleko kumashishini. Ukukhusela idatha kunye nezezimali, amashishini kunye neenkampani zihlala zifaka iindleko ezongezelelweyo ukuthatha amanyathelo othintelo kulwaphulo olunokubakho lwedatha. Ukusuka kwi-2017 ukuya kwi-2021, inkcitho eqikelelweyo ye-intanethi kukhuseleko lwe-intanethi iya kuba ngaphezulu kwe- $ 1 trillion.
Eli khasi lagqityelwa ukulungiswa kwi-28 EyoMqungu 2021, kwi-14:35